Na-anwale na Gender Dysphoric Kids | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Nleta na Ụmụaka Dysphoric
Tugharia pdf site na iji webusaiti a: - https://www.onlinedoctranslator.com/
Ndị dọkịta na-ahụ maka ụmụaka nwere ngụkọta nke afọ 931 gosipụtara naanị ikpe 12 nke mgbagwoju anya nwoke na nwanyị, nke pụtara na ọ bụ naanị otu ikpe ziri ezi ka a ga-atụ anya kwa afọ 76. Ugbu a, kwa afọ n'Australia, ọtụtụ narị mmadụ na-eweta ọgwụgwọ nke a ga-enyerịrị iwu nkwalite ọdịnala dị elu
Ọmụmụ ihe anọ bipụtara na nso nso a Pediatrics, akwụkwọ akụkọ a na-akwanyere ùgwù nke American Academy of Pediatrics, gosipụtara nnwale nke “Protocol Dutch” nke ntinye aka na ahụike nke dysphoria nwata na-eme ugbu a na Western Western, gụnyere ụlọ ọgwụ pụrụ iche n'ụlọ ọgwụ ụmụaka Australia. Ha na-ekpughe ọhụụ ọhụụ banyere ọdịdị nke nsogbu uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbe a na-ele ya anya site na oghere echiche nke ịdị ọcha nwoke na nwanyị. Usoro echiche a na-ekwusi ike na ọnweghị ọnụọgụ abụọ dị ka nwa agbọghọ na nwa nwoke: okike anyị dị na mpaghara mgbanwe na "egwurugwu". Ọ na-ahụta nsogbu uche metụtara ya site na nkụda mmụọ nke nne na nna na nke ọha mmadụ na-enwe maka mmezu nke ihe ahọpụtara ahọrọ nke nwoke na nwanyị si na kromosomal. Mgbakasị a bụ ihe kpatara nsogbu ahụ, na dysphoria okike bụ naanị otu ihe atụ nke nsogbu ọgbụgba, ebumpụta ụwa. Echiche nke mmụba nwoke na nwanyị ga-eduga na nkwubi okwu ahụ na ụmụaka ahụike gharịị ka ndị ọrụ ahụike mejuputara na okike ha chọrọ ka okike ha nwee.
Mara dị ka Protocol Dutch maka na etolitere ya na Netherlands, ụzọ ahụike nwere ike ibute itinye aka na uche na ahụ nwatakịrị na-agbanyeghi enweghị ntọala sayensị. Ihe ngosiputa ohuru nke nlebara anya na nlebara anya nke Australia maka trans na okike di iche-iche nke umuaka na ndi okenye ”ekwuputara n'ihu ọha na esiteghi na iwu ndi ekwenyeghi na usoro ọgwụgwọ ahuike ndi Western, tinyere ikike ndu ya, ihe akaebe nke mmetụta na enweghị nsogbu na ọmụmụ ihe bench. , nnwale ụmụ anụmanụ na ọnwụnwa ụmụ mmadụ. Kama nke ahụ, ha dabere na “nkwekọrịta ụlọ ọgwụ… yana ọnụọgụ nke ntuziaka nyocha ahụike na-enweghị usoro na ọmụmụ nyocha”: yabụ, n'echiche “ọkachamara” nke ndị dọkịta na-agba ụlọ ọgwụ.
Ederede a pụtara na nke kachasị ọhụrụ Anọ ebe.
Na ntụle, enwere usoro ise na usoro iwu Dutch, nke na-amalite na ntughari mmekọrịta nke nwatakịrị nabatara aha, nnochi, akwa na ụdị nke nwoke na nwanyị. Oge 2 Ihe ndi ozo kwesiri isi na ogwu banyere ogwu gha egbochi oria homonụ nke ahu ghari ibugharị ya na gonads iji mee ka amuputa nwoke na nwanyi, yana izoputa homonụ nke nwoke na nwanyi (testosterone na estrogen) nke butere oria. jidesie njiri mara nwoke ma obu nwanyi. A maara ọgwụ ndị a dị ka 'ndị na-eto eto igbo'. Enwere ike inye ha na mmalite ntorobịa: nwatakịrị kachasị na Australia ịnabata ha ka dị naanị afọ iri na ọkara.
Oge 3 Nlekọta homonụ nke nwoke na nwanyị inwe ebumnuche ịchụpụ agwa nke nwoke ahụ. Ka oge na-aga, ikpughepu homonụ ndị na-abụghị ihe dị iche iche ga-eduga n'ịrụ ọrụ kemịkalụ. Agbanyeghị na ntuziaka mba ụwa na-atụ aro ịwa ahụ a na-aghaghi idogharị ka ọ ga-egbu oge rue afọ iri na asatọ, ma ọ dịkarịa ala ụmụ nwanyị ise nọ na Australia agbaala mastectomi tupu afọ ahụ.
Oge 4 gụnyere ịgbazigharị akụkụ ahụ nwoke na nwanyị na ihe ndị ọzọ na nwoke na nwanyị dịka nwoke “apụl Adam” na nkesa ntutu, mana ọ bụghị ha niile họọrọ ime ihe ahụ.
Oge 5 adabaghị na akwụkwọ nkwado. Nkwenye ndụ bụ nlekọta nke usoro ọgwụgwọ homonụ na, ikekwe, ọnọdụ uche. Maka ndị na-apụta na Phase 4, a ga-enwe mkpa ijigharị ure-akụkụ akụkụ nwoke na nwanyị na nsogbu nke oghere na mgbochi.
Ihe ndị dị na Pediatrics kwadobe enweghi ihe ndabere sayensi maka nnabata a. Ndị dere ọmụmụ ihe mbụ ahụ kwenyere na ha nwere ụkọ “ụkọ” n'isiokwu: ha nwere ike ịhụ naanị akwụkwọ nyocha iri na atọ nke ọ bụla dị mkpa kemgbe 1946! Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime isiokwu ndị a na-atụle mmetụta n'ozuzu nke ọgwụgwọ homonụ, dịka ọmụmaatụ na uto uto, ha na-ekpughe enweghị nchọpụta ọhụụ banyere mmetụta Dutch Protocol na ụbụrụ na-eto eto nke ụmụ mmadụ na-eto eto, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na amaara homonụ ndị dị na ha na-egwu. isi ọrụ zuru oke na akụkụ ahụ.
Ọmụmụ ihe atọ ndị ọzọ kwetara na ọ dị mkpa ka e mekwuo nnyocha banyere ihe kpatara nsogbu ụbụrụ na nsogbu ezinụlọ mana, na ime nke a, ha na-ekpughe ọhụhụ nke echiche ha, na-echekwa echiche dị omimi nke nwoke.
Ihe omumu nke 1: Ndi ode akwukwo Australia na-ekwuputa na ha di otutu
Emere ihe omumu nke mbu bu “Hormonal treatment in the Young People with Gender Dysphoria: nyocha nke usoro” ma bụrụ nchịkọta nke akwụkwọ mba ụwa na “psychosocial, cognitive and / or body cure”. Ọ bụ isiokwu dị mkpa na mpaghara Australia n'ihi na ndị dere ya jikọtara ya na ụlọ ọrụ ndị a ma ama dị ka Royal Hospitallọ Ọgwụ Royal, Melbourne, nke bụ isi mmalite nke Protocol Dutch na mba a.
Ikwuwapụta na mmeghe ha na ọmụmụ ndị dị 'ụkọ' bụ ihe enweghị nghọta: n'etiti Jenụwarị 1946 na June 2017, ha ga - ahụ naanị akwụkwọ iri na atọ dị mkpa ọ bụla. Ha chọpụtara na ụkọ a “nwere nsogbu” n'ihi na “oge ntorobịa bụ oge mmepe ngwa ngwa gafere n'ọtụtụ ngalaba” nke usoro ọgwụgwọ homonụ na transgending nke okenye agaghị enwe ike “ịtụgharị”. Nsogbu a dị na enweghị akwụkwọ ọgụgụ sayensị nke metụtara ihe ahụ nwere ike ibute ụbụrụ ụmụaka na-eto eto n'oge uto na uto.
Leekwa Transgenderism nke mgbanwe
Ndị ode akwụkwọ na-ewebata ihe omume ndị nwoke na-etolite etolite na homonụ na-enwe mmekọahụ na nkọwapụta mmetụta ụfọdụ nke anụ ahụ, na-ekwubi na "n'ozuzu, usoro ọgwụgwọ homonụ maka ndị ntorobịa transgender adịghị mma." Mgbe ahụ ha mebiri ntụkwasị obi ahụ site na ịnabata "oge nkwụsị ọmụmụ dị obere." Ha tụlere nsonaazụ uto ọkpụkpụ nwere nchegbu dị oke egwu mana ha dọkwara aka na ntị banyere “ọrịa metabolic na akwara dị iche iche” amaara na ha na-esonyere homonụ nwoke na nwanyị inwe mmekọ nwoke na nwanyị.
Banyere “nsonaazụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya,” ndị dere akụkọ a na-ekwu na usoro ọgwụgwọ transgendering bụ 'esonyere ndozi dị ukwuu n'ọtụtụ ụzọ mmụọ, gụnyere arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ịda mba… na omume na / ma ọ bụ nsogbu mmetụta ". Agbanyeghị, ha kọpụtara nyocha ndị ahụ kpughere “mmetụta doro anya nke iwe na ụjọ” yana “enweghị mmetụta pụtara ìhè na mgbaàmà nke GD [okike dysphoria]”. N'ezie, otu nnyocha tụpụtara "mmụba na GD na ihe isi ike nke ihe oyiyi".
Ndị dere ya, ekwughi banyere adịghị ike na ọmụmụ ihe ndị a na-ekwu na ọ bara uru na uche, ma kweta na enwere “oghere”. Adịghị ike ndị a gụnyere mmachi ụmụaka amụrụ ihe, oge agụghị amụrụ ihe, enweghị njikwa, na ohere nke ikiri ihe nlere. Mgbe otu ndị ahụ na-enyocha, na-elezi ma na-atụpụta nsonaazụ (na-enweghị atụ) na obere ìgwè ụmụaka na-ata ahụhụ, o kwere omume ịdị na-ele ihe anya. Ọmịiko, naanị ya ga-eme ka mmadụ nwee nchekwube.
Ihe ọzọ dị mkpa na-ekwenye na akparamaagwa bụ uru dị ukwuu ụmụaka na-ata ahụhụ site na nsogbu uche (dịka esi kọwaa ya na akwụkwọ nke abụọ). Nsonaazụ nke itinye uche, ọmịiko, nkwado ndị ọkachamara, nke otu ndị okenye tozuru oke iji nwekwuo obi ụtọ nwatakịrị nwere ike ịbụ, site n'onwe ya, ka ọ dị mma, ịghara ịkọ banyere mmetụta ọgwụ ọ bụla ọzọ ụmụaka nwere ike inweta.
Banyere “mmetụta ọgụgụ isi” nke ọgwụgwọ (n’ikike ụbụrụ na akparamàgwà nke nnata), ndị dere akwụkwọ ahụ nwere ike ịchọta naanị ederede abụọ, ha abụọ metụtara ọmụmụ ihe adịghị ike. Otu nnyocha nyochara “ọrụ nchịkwa” na ụmụaka asatọ na ndị na - egbochi, ma ọ bụ ezie na ọ chọpụtara na "a na - agbadata izi ezi" na ụmụ ntorobịa na - ebugharị ụmụ nwanyị, mkpa nke nchọpụta a na - ezighi ezi dara site na ịgbagha ọnụ ọgụgụ nke ụmụaka dị obere maka nkwado. Ihe omumu omumu a nyochara ikike nke anya, nke a na-ekwenye na o buru ibu kari ndi nwoke, akwara na o di elu na umu nwanyi ndi natara testosterone onwa iri. Enweghị mmetụta ndị ọzọ na ụbụrụ ka enyocha.
Ndị ode akwụkwọ abụọ n'Australia nyochara nke ọma “ịdị mma” na “ihe ọghọm” nke agụmakwụkwọ iri na atọ ahụ, onye kwubiri: “N'ihe ọmụmụ niile, enwere ihe ọghọm na-akpata oke mgbaka” n'ihi ọnụọgụ dị nta nke isiokwu, abịaghị nke njikwa, mfu ijighari, nyochaghachi, enweghị ihe nlere anya na enweghị “kpuo ìsì” nke ndị nyocha.
N'ụzọ dabara adaba, ndị otu Australia kwusara mkpa ọ dị "iji nyochagharị ma gbasaa na nchoputa nke ọmụmụ ndị a dị." Ha kọwara enweghị ike ịkwụsịlata akara nke dysphoria okike dị ka “ọ bụghị ihe ijuanya”, na-ekwu na ọ ga-abụ ihe ezi uche na-atụ anya na ndị na-egbochi 'belata enweghị mmasị' nke ihe ndị metụtara mmekọahụ na "imeju ... agụụ" maka atụmatụ anụ ahụ nke nwoke na nwanyi. Ha ekwurita enweghi ike nke ihe igbochi ibelata nsogbu uche nke nke dysphoria nwere ike buru ma obu akara.
Banyere mmetụta homonụ na-enwe mmekọahụ na cognition, ewezuga obere nkọwa testosterone, ndị na-enyocha enyocha ahụ enweghị akwụkwọ ọ bụla dị mkpa.
N'ozuzu, ndị edemede Australia kwubiri na ọmụmụ ndị dị adị 'eleghaara ọtụtụ nsonaazụ igodo'. Ndị a gụnyere “ihe mgbaàmà nke uche… nke bụ oke ihe omimi ihe ọmụma”; mmetụta ọgwụgwọ na ọmụmụ; enwere ike ị na-enwe mmetụta anụ ahụ ndị ọzọ gụnyere uto na ịrụ ọrụ akwara obi; na ụzọ mwepu site na ọgwụgwọ, ọkachasị akwa ụta.
Edemede na-akọ ụkọ agụmakwụkwọ adịghị iche. Akwụkwọ ndị ọzọ dị na akwụkwọ gbasara ụmụaka na-eme mkpesa banyere "enweghị nkwekọrịta gbasara nnyonye anya kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ọbụna ebumnuche nke kwesịrị ekwesị", "obere data sitere na naanị otu ụlọ ọgwụ", "enweghị usoro nyocha, na-achịkwa nke na-enye ndụmọdụ doro anya. maka nhọrọ ọgwụgwọ ”. Yabụ, ihe akaebe kacha mma dị bụ 'echiche ọkachamara', nke na-emetụta usoro nkwenye ọdịnala na usoro “usoro echiche”.
Ihe omumu nke 2: Nsogbu uche nke ejikọtara na dysphoria okike
Ihe omumu nke abuo a bu “Uche nke ndi transgender na okike ndi n’emeghi ka ndi ozo n’onye ha na ndi enyi ha” ma lebara umuaka ndi America anya site n’afo ato rue afo iri na asaa bu ndi achoputara dika “Transgender and Gender Nonconfirming” (TGNC) site n’aka ndi dibia ya n’ulo ogwu ha. , Kaiser Permanente. E nyochara ihe ndekọ banyere ụmụaka 1333, nke 251 gbara afọ site na atọ ruo itoolu, na 1082 site na iri ruo iri na asaa.
Ekwenyere na ọrịa ọgụgụ isi bụ ihe zuru ebe niile. N'ime ụmụ site na atọ ruo itoolu, 31.7 pasent natara nchoputa gọọmentị dabere na nhazi ọkwa nke mba, Nchịkwa itoolu (ICD-9). Otutu oge ha nwere nsogbu oria nlebara anya (ihe dika 15 pasent), nchekasị (pasent 14), na omume ma ọ bụ ọgba aghara aghara. N'ime ụmụ transfemale 5 pasent nwere autistic, na 11 pasent nke ntụgharị na-enwe ịda mba.
N'ime ndị okenye okenye nke ụmụaka 1082, ọnụọgụ 73 pasent ka achọpụtara na nkwarụ uche sitere na nchekasị (ihe dị ka 38 pasent), nlebara anya (19.6 pasent), nsogbu ndagide (56 pasent), na Autism (5 kwa cent). A chọpụtala Frank psychoses na 4.7 pasent na schizophrenia ụdị na 1.6 pasent. Na ngụkọta, 14.5 pasent ụmụaka ahụ nwere nsogbu nke nsogbu uche na ha chọrọ ka elee ha n'ụlọ ọgwụ.
Ndị nyocha ahụ zeere ajụjụ bụ isi: Nke buru ụzọ bịa: nsogbu uche ma ọ bụ dysphoria okike? N’ezie enwere ike ideta mmekọrịta nwa oge na ihe ndekọ ha? Dị ka a ga - asị na ị na - ezere ajụjụ nke ihe kpatara ya, ndị edemede kwalitere ya, na - ekwupụta na "ụmụaka ndị natara nkwado njirimara okike apụtachaghị oke ịda mbà n'obi na nchegbu". Ha akọwapụtaghị ụdị ihe ahụ, ma ha na-agba mbọ hụ na ihe “ga-esochi” ga-eme ka ha nyochaa mmetụta ya. Ka ọ dị ugbu a, ha na-anọgide na ọnọdụ nke "nnukwu ejighị n'aka".
Ka ọ dị ugbu a, ka ha “na-eso” ma ịchọpụta ma nwoke na nwanyị ihe nnwale ahụ ga-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ gaghị aga, nwatakịrị nwere nsogbu mmụọ dị ya nso, dịka nke akpaghị aka, ka a ga-eduga n'ụzọ ga-eduga n'okwute na anụ ahụ. njirimara nke nwoke na nwanyi.
Enwere ọtụtụ akụkọ gbara ọkpụrụkpụ banyere dysphoria okike -esonụ Kama ibido mmalite nke ọrịa uche. Dịka ọmụmaatụ, ntụle banyere ikpe na-ewetara ụlọ ọgwụ Finnish sitere na 2011 ruo 2013 kwupụtara pasent 75 “enweela ma ọ bụ na-anabatakarị ọgwụgwọ ụmụaka na ndị na-eto eto maka ebumnuche dysphoria okike mgbe ha chọrọ Ntughari”. Pasent 64 nwere ọgwụgwọ maka ịda mba, pasent 55 maka nsogbu ụjọ, 53 pasent maka igbu onwe ya na omume imerụ onwe ya, 13 pasent maka mgbaàmà psychotic, 9 pasent maka omume ọgbaghara, 4 pasent maka ị substanceụ ọgwụ, 26 pasent maka nsogbu ụbụrụ autism na 11 pasent maka ADHD. N'ime ụmụaka ndị a, pasent 68 nwere kọntaktị mbụ ha na ọrụ mmụọ n'ihi ihe ndị ọzọ na-abụghị okwu njirimara nwoke na nwanyị.
Ihe omumu nke 3: mmeri
Edemede nke atọ, “Ileba Anya na Ọdịmma Ahụike nke LGBTQ Ndị Ntorobịa”, kwupụtara oke ọnụego nke ịda mba metụtara, ọkachasị na ụmụ nwanyị, nke gara n'ihu na "ntorobịa nke ndị na-eto eto inwe mmekọahụ". Achọtara ya na "afọ ojuju ezinaụlọ" dị ala karịa ka ụmụaka na-emetụta, "ịtụ ụjọ" dị elu, mana "nkwado ndị ọgbọ" bụ nke yiri. Ekwuputara nyocha ọzọ ka ọ dị mkpa, ọkachasị na nsonaazụ nke ndị nne na nna jụrụ nke njirimara na-abụghị nwoke.
Ndị edemede kwetara na mmachi ọmụmụ ha bụ ọdịda ya nyochara mmekọrịta nwa oge n'etiti mbido ịda mbà n'obi na ọnyụnyụ ọbara. Agbanyeghị, nkwanye aka ha na mkpa ọ dị inyochakwu nleghara ịhapụ nne na nna na ịba mba na-eme ka mmadụ chee na nsogbu nke ụbụrụ bụ site na mmụba nwoke na nwanyị. Adịghị ike nke ọmụmụ a bụ ọdịda nke ịkọsa ojiji na mmetụta nke usoro ọkọlọtọ ọ bụla maka ịda mbà n'obi.
N'ụzọ dị nwute, ndị dere enwetaghị ihe ọ bụla karịa ebubo nke ịbụ onye ihe metụtara site na iji egwu egwu, na-ezere ịdị mkpesa nke mgbasa ozi na-elekọta mmadụ maka ejiji na ịbanye n'ọrụ na-ekwesịghị. Ihe ndekọ nkeonwe na webụsaịtị 4thwave.com na-akọ ike ike nke websaịtị pro-transgender dị ka Tumblr: obi ike nke "ịpụta" na iguzogide mmegide nke ndị nne na nna, na amamihe nke iwere "ezigbo onwe". N'oge niile enwere nnabata nnabata n'ime "ezi on-line", yana inye ndụmọdụ banyere ihe mgbochi na homonụ nwoke na nwanyị, obi, mastectomies na ịwa ahụ nwoke na nwanyị, yana ikike nke iyi egwu nke imerụ onwe ya ahụ. na onye nkiri igbu onwe ya.
Otu nwatakịrị nwoke kọwaara m otu ọ ga-esi nọọ ọtụtụ awa na weebụsaịtị, nke mechara yie ezinụlọ: ịnabata, gbaa ume, na-akwadoghị nyocha niile nke njirimara nwoke na nwanyị ọzọ, na ịza ajụjụ niile na-akpachi anya. Egwu cyber na-apụta naanị mgbe ọ malitere igosi obi abụọ. Mgbe ọ jụrụ ajụjụ banyere ite ime, mmegbu ahụ sitere na ụzọ ndị a na-ahụkarị ikuku gaa na adreesị ozi ịntanetị ya, nke ọ lere anya dị ka nke onwe. Mgbe o kpochapụrụ onwe ya, o kwuru na (ikekwe na-eju ya anya), “Mama ekwu eziokwu.”
Ihe omumu nke 4: ihe isi ike nwata
Ọmụmụ ihe nke anọ, “Ihe dị iche iche maka ndị na-eto eto LGBTQ na Gender Nonconforming dimkpa”, nyochara usoro nhụjuanya nke ụmụaka na Lesbian Gay Bisexual Transgender na ajuju na-eto eto (LGBTQ) nke gụnyere inwe nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta n'ụlọ mkpọrọ, ibi na onye na-a drinkụ mmanya ma ọ bụ onye na-a drugụ ọgwụ ọjọọ, ọgụgụ isi , mkparị n'ụzọ anụ ahụ na nke mmekọahụ, na ịhụ àmà mmetọ ezinụlọ. Ebumnuche bụ ịchọpụta nhụjuanya ma ọ bụ njikọta ya jikọtara ya na ịbụ LGBTQ. Ọ bụghị ihe ịtụnanya, n'ọmụmụ ihe ahụ kwuru na nhụjuanya dị elu na ụfọdụ ndị ntorobịa LGBTQ na, ka ukwuu na nhụsianya ahụ, ka ukwuu na njikọ mmekọrịta nwoke na nwanyị na-abụghị nwoke. Imirikiti ndị ntorobịa LGBTQ, agbanyeghị, kọrọ ọtụtụ nsogbu.
N'agbanyeghị ọtụtụ ahụmịhe ọgba aghara ndị a tụlere, nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịtụ anya na ọ ga-emerụ mmepe nwatakịrị, isi ihe dị na edemede ahụ bụ maka "nyocha ndị ọzọ gbasara ọjụjụ ndị nne na nna jụrụ nke ụmụ amaala mmekọahụ. Na-eme ka a mata banyere echiche ahụ bụ isi ihe kpatara nsogbu uche bụ na ndị nne na nna ekweghị anabata mgbanwe nwoke na nwanyị, ndị dere akwụkwọ a na-ekwu okwu mmalite nke ọgba aghara nwoke na nwanyị mgbe nne na nna anọghị ma ọ bụ na uche adịghị. Ha kwuputara, “amabeghị ugbu a ihe kpatara na ndị ntorobịa LGBTQ… ga - eji nwee ike… nne na nna onye a tọọrọ ma ọ bụ jiri ọgwụ ọjọọ”.
Ọhụụ dị otú ahụ na-adọpụ uche na ihe ndị ọzọ nwere ike ibute dysphoria okike: nkwalite nke dysphoria maka uru mmetụta uche nke ndị nne na nna, nke a maara dị ka Ọrịa Mịnịstọ nke Proxy; mbanye n'ọrụ nke mmụọ nke uche nke ndị mgbasa ozi na-anụ ọkụ nwere mmụọ; mkpakọrịta nke ndị na-eto eto na-enweghị obi ụtọ na ebe nrụọrụ weebụ nkwado; gbanahụ nwoke ma ọ bụ nwanyị inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na ekpughepụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ mmetọ mmekọahụ; echiche onye nwoke nwere olile anya di nma karia ndi okacha amara; psychosis, n'ụzọ nke anorexia nervosa ma ọ bụ ọbụna schizophrenia; na, n'ikpeazu, ajụjụ a na-akọ banyere nwatakịrị na-ebuwanye ibu site na mgbasa ozi na-akwalite ihe omume a na-akpọ “Nchebe” n'ụlọ akwụkwọ.
Nhazi: ịchebe ndụ site na nkwupụta
Nchịkọta nke sonyere abụọ n'ime akwụkwọ edemede ahụ na-ekwupụta na ndị dibịa kwesịrị ịghọta “ihe ndị dị ize ndụ”, ma nwee ike ịnye nkwado “nke na-azọpụta ndụ”, gụnyere “ọgwụgwọ nkwupụta okike”. N'ihi ya, ọ na-ewusi echiche manipulative na dysphoria okike, kwa se, nwere ike iduga igbu mmadụ. Edemede nke abụọ na-akọ akụkọ banyere mmadụ imerụ onwe ya ahụ karịrị nke ọnụ ọgụgụ ndị ntorobịa kwuru okwu mana ọ naghị ekwupụta ebumnuche nke ihe a. Ọ bụ ka ànyị lebara ya anya ka ọ bụ igbu onwe ya? O putara site na dysphoria nke nwoke ma obu nsogbu oria di adi?
N’ezie, enwere ohere dị elu nke imerụ onwe ya na igbu onwe ya n’ebe ndị nọ n’oge uto metụtara nsogbu uche, dị ka ịda mba n’obi, nke a na-ejikọkarị dysphoria nke nwoke. Allmụaka niile nwere ntụgharị nke eziokwu chọrọ nlekọta na ọmịiko kachasị, gụnyere ndị nke ejighị n'aka na ha bụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị, mana enweghị akaebe sayensị iji kwado iyi egwu dysphoria okike, kwa se, yikarịrị ka ọ ga - ebute igbu onwe ya nke na onye nwere nsogbu ahụ kwesịrị ịnata nnukwute enyemaka nke Dutch Protocol. N'ezie, dị ka ọmụmụ ndị Europe na-egosi na ọnụ ọgụgụ dị elu nke igbu onwe onye na njirimara transgender ndị okenye, a ga-azọpụta ọtụtụ ndụ site na izere mgbanwe mgbanwe ndị ntorobịa, na-enye atụmanya na-atụgharịghachi na mmekọahụ nke nwoke site na mgbe a na-eto eto.
Corollary: ọdịda ekwenyeghi bụ mmetọ ụmụaka
N'ihe banyere arụmụka na nkwupụta a ga-azọpụta ndụ bụ ebubo na ekwenyeghị na ya ga-etinye ha n'ihe egwu ma, yabụ, na-emetụta mmetọ ụmụaka. N'Australia, nsogbu ndị nne na nna na-enwetabeghị na-eme ka nwa ha bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị na-esite na nwa na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na nwanyị na-esite na nke nwoke. N'otu aka ahụ ndị ọrụ ọgwụgwọ na-enweghị mgbagha na-agbagha n'otu aka ahụ.
Iwu mkpesa Ahụike nke 2017 na-enye onye kọmịshọna ikike ime nchọpụta na ikpe ndị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwupụta njirimara na-abụghị nwoke na nwanyị. Na mmekpa ahụ dị oke egwu nke oke ruru mmadụ, a ga-ekpe ndị ahụ eboro ebubo ikpe ruo mgbe egosiri na aka ha dị ọcha.
E chetaara ndị nkuzi na ndị isi na Ngalaba Mmụta Ọhụrụ nke New South Wales banyere ọrụ dịịrị ha ịkọrọ ndị ọrụ mmetọ nwatakịrị, ma kọwaa otu nke a nwere ike isi gụnye mmegide ndị nne na nna megide nwatakịrị na-egosi na nwoke na nwanyị.
Mpempe usoro ihe omume nke Ndị Ọrụ Ọchịchị na Ọstrelia kwadebere maka Nzukọ Ọgbakọ Mba a na-esote afọ a gụnyere, na nke mbụ, na Isi nke 10 ("Ọchịchị onye kwuo uche ya na gọọmentị dị irè") otu usoro akọwapụtara maka ọgwụgwọ ntụgharị nwoke. Paragraf nke 83 kwuru, “Oru na-emegide omume nke a na-akpọ ntụgharị na usoro mmeghachi omume n'ahụ ndị LGBTIQ ma chọọ [sic] mebie iwu ndị a. ”
Ekwuputala ndị na-ekwuchitere ahụike gọọmentị ALP, Catherine King, ekwuputala na 'ịkwụsị ikpochapụ ndị mmekọ nwoke na nwanyị ga-abụ' ihe dị mkpa 'ma ọ bụrụ na Labour merie ntuli aka na-esote. " Enweghi oke mmachi na usoro ọgwụgwọ na, yabụ, iwu ọhụrụ ndị a 'ga - hụ na ndị ọrụ nchekwa ụmụaka na-ekweta ịnwa' ịgwọ 'Mmekọ nwoke na nwanyị na-eto eto dị ka mmetọ dị egwu, ma kweta mmebi ndị a, mgbe a na-ata ahụhụ n'ime ezinụlọ. dị ka ime ihe ike n'ụlọ megide nwata ”.
“Usoro ntụgharị” bụ ugboro abụọ maka ịgbalị ịbelata ọnyụ nwoke na nwanyị site n'inyere nwa ahụ aka iru na njirimara nke ọmụmụ ya, ghara iwebata nwa ahụ n'ụzọ nke nkwenye. Ichere mgbe niile maka ihe na-emetụta ndu nwata bụ ihe a na-ewere dị ka mmehie imebi iwu, site na iwu gọọmentị etiti nyere ntaramahụhụ kwesịrị ya. N’ọdịnihu, ọ nwere ike ịbụ ihe egwu nye nwatakịrị igosipụta mgbagwoju anya nke okike: onweghị onye ga-enwe ike ichebe ya na usoro nke steeti.
N’ụzọ na-emegide onwe ya, n’ihe a nile, ụfọdụ ndị na-edina ụdị onwe ha na-amalite ịhụ mgbukpọ ha ga-eme n’ọdịnihu. Otu nwoke kwuru, sị: “Obi dị m ụtọ na etolitere n'oge gara aga, ma ọ bụghị na mmasị m nwere maka uwe ndị dị nro, ụcha na egwuregwu, na iso ụmụ nwanyị, gaara eduga n'ọzọ m!” Ọ bụrụ na o tolitere na n'oge a, enwere ike ibo ndị mụrụ ya ebubo na ha mere ụmụaka ihe n'ihi na ha edoghị ya na usoro iwu ahụ, ma ọ bụrụ na edebanyela dọkịta na-eguzogide ọgwụ, ma ọ dịkarịa ala.
Ahịrị nke akaebe? Leruo ụmụ anụmanụ anya
Ihe kacha pụta ìhè n’isiokwu ndị na - adịbeghị anya bụ enweghị ndabere nke sayensị maka Protocol Dutch. Ekwesịrị ka amata usoro iwu ahụ dị ka nnwale. Nke ka njọ, dị ka ndị dere ọmụmụ ihe mbụ si gosipụta, nnwale a na-enwe ugbu a enweghị ntọala na nnwale ndị bu ụzọ.
Principlekpụrụ izizi nke ọgwụ a na - emebu “Emela ihe ọjọọ” na, ma ọ bụrụ na enwere mmekọrịta dị mgbagwoju anya nke homonụ na neurons na etiti na usoro akwara, enwere ike ịtụ anya na nsonaazụ nkwụsị ahụike ga-enweta nlebara anya kachasị mkpa. Mana nke ahụ abụghị ụdị ụmụaka na ụmụ ntorobịa n'okpuru Usoro Ochichi nke Dutch. Akwụkwọ mbụ ahụ chọtara naanị otu ọmụmụ na-echetụdịghị mmetụta testosterone, ọ nweghịkwa nke nyochara mmetụta ọgụgụ isi nke progestin, antiandrogens na estrogen. Nke a bu ihe nlere anya di egwu nke sayensi, ebe akuko kwuru na otutu puku umuaka na-aghabe n ’ulo ogwu dysphoria nke ndi Western Western, ma ya mere ha nwere ndu ha.
Ọ bụrụ na ndị dere agbatịala nyocha ha na nsonaazụ nke ndị ngọngọ na ụbụrụ ụmụ mmadụ toro eto yana ọrụ nyocha na anụmanụ (nke na-abụbu iwu nke iwu ọgwụ ọjọọ) a ga-akwụghachi ha ụgwọ n'ọtụtụ ntụaka. gaara adọ ha aka na ntị na mmetụta nke ndị na - egbochi ọnụnọ na - echeghị “echekwabara” na “a na-atụgharị ya” dị ka ndị na-akwado Protocol Dutch kwupụtara.
Gonadotropin na-ewepụta homonụ (GnRH) na-ezo n'ime mkpụkọ mkpụrụ ndụ site na mkpụrụ ndụ ụbụrụ dị nso na akwara pituitary iji mee ka gland ahụ wepụta homonụ ndị ọzọ (gonadotropins) nke ga-eme njem n'ọbara gaa gonads iji mee ka ntọhapụ nke homonụ mmekọahụ, estrogen na testosterone. “Ihe mgbochi” bu kemikal yiri nke GnRH mana ha na - akpata mkpali a na - akwagide nke (nke a (achoghi pulsatile)) ma kpochapu ikike nke gland a ka esi aga n’ihu meputa gonadotropins. Enweghị mkpali nke gonadotropins, gonads ahụ agaghị emepụta homonụ mmekọahụ na, yabụ, mgbanwe nke nwoke.
N'ihi na ụfọdụ nsogbu ahụike nwere ike ịkawanye site na estrogen (dịka ọmụmaatụ, endometriosis n’ime ụmụ nwanyị) na testosterone (ọrịa cancer na-efe efe na ụmụ nwoke), ewepula ọrụ iji belata nzuzo ha. E kwupụtala ihe ndị ọzọ ọ na-akpata, mana ọ dị iche na ihe ndị metụtara ya dị ka ịka nká siri ike. Ka o sina dị, a kọwo na ojiji ha ejirila nsogbu uche mee ka ihe gbagwojuru anya ma belata “ọrụ isi” nke ụbụrụ. Nke a ka lere anya na nso nso a, ojiji ha ji umunwanyi ndi nwegasiri ya na ihe mmerita a na-achoghi anya na nsogbu nke eriri afọ nke o doro anya na ọ bụ nbibi akwara nke na-ebute akwara. Ọmụmụ ihe ndị a atụpụtala ọrụ maka GnRH gafere ihe mkpali a na-akpọ pituitary ka ọ bụrụ ọrụ zuru oke maka ndozi mkpụrụ ndụ akwara.
N’oge na-adịghị anya achọpụtasịrị GnRH, ihe karịrị afọ iri anọ gara aga, ọmụmụ gbasara ụmụ anụmanụ kpughere na ngalaba mkpụrụ ndụ ụbụrụ nke na-echekwa GnRH na-aga n’ihu n’akụkụ akụkụ ụbụrụ nke metụtara mmekọahụ, ọgụgụ isi, ncheta, mmetụta na ọrụ onye isi. E gosipụtara ọrụ nke GnRH na mpaghara ndị ahụ site na ịchọta ọnụnọ nke ndị na-anabata ya. Enwere ike ịchọta GnRH ahụ n'ime mmiri mkpụrụ mmiri na-agba ụbụrụ nke na-asa ụbụrụ na-atụ aro na mmiri nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ maka nkesa zuru ebe niile, gafere ọnụnọ mkpụrụ ndụ odeakwụkwọ GnRH.
Mgbe nke a gachara, igba ogwu GnRH na saịtị nke ụbụrụ rụpụtara nsonaazụ ụfọdụ. Ọkachasị, achọpụtara ya na mpaghara metụtara mmekọahụ ka achọpụtara iji mee ka mmekọrịta nwoke na nwoke nwee mmekorita nwoke na nwanyi. N'aka nke ozo, nmeghari mmekọahụ belatara site na igbochi uto nke GnRH site na iji ọgwụ mgbochi pụrụ iche, yana mgbochi pụrụ iche nke ekwenyero na ọ na-emetụta omume mmekọahụ n'oge ụmụ anụmanụ. Ọ na - egosi na GnRH na - agbanye mmekọahụ, na mgbochi ya na - agbanyụ ya.
A na-emewanye mmetụta GnRH karịa na njirimara mmekọahụ na omume site na ịchọpụta na isi dị iche iche (pheromones) nke ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike ịkwalite ntọhapụ nke GnRH iji mee ihe na ebe a na-enwe mmekọahụ na ụbụrụ, yana iji mee ka ọ bụrụ ihe na-eweta. Nke abuo weputara homonu nwoke nke nwoke na nwoke inwe mmekorita nwoke na nwanyi na mmekorita ha na-enwe mmeko. Ma n’oge na-adịghị anya, achọpụtara ya na “mkpali mmekọrịta nwoke na nwanyị” maka njirimara nwoke na nwanyị dị na “gburugburu ebe obibi mmekọrịta bara ụba na nke jupụtara ebe nlegharị anya, ụda na isi nke ndị agbata obi ha, ndị di na ụmụ na ụmụ. Ya mere, na aturu, ọnụnọ nke onye na-enweghị isi nke nwoke na nwanyị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike ime ka mwepụ nke GnRH ozugbo. Ọbụna foto nke ebule nwere ike ibute mmekọahụ na nwa atụrụ, dịkwa ka nkpuchi nke ebule n'ihu nwanne ya nwanyị.
Nchoputa ndi a banyere aturu rụtụrụ aka na mmụọ nke “sociosexual” nke mmekọrịta nwoke na nwanyị nke metụtara uche, ncheta na mmetụta, na-emetụta oke homonụ, na-eme ka mmeghachi omume ha dị njọ site na ntuzi aka nke chromosomes. N'agbanyeghi na aghotaghi ya, ike nke mkpali ndi a doro anya. Nkọwapụta ịhụnanya dị ka “ọmarịcha nrọ na ọrụ ọgbụgba” dabara adaba n'ụzọ anụ ahụ mana ọbụlagodi na Bible aghọtaghị “ụzọ nwoke nwere nwa agbọghọ” ọ bụ ezie na ike ọ dị doro anya onye ọ bụla.
Na ngwụcha, achọtara ndị na-anabata GnRH n'ime ahụ niile site na ụbụrụ ruo na azụ azụ, ruo na akwara ozi na eriri afọ yana rue gonads, na-egosi na o nwere ike bụrụ ọrụ zuru oke. Ma, oburu na ulo oru ogwu, ya bu na ufodu ulo ogwu, a na aju ajuju banyere ihe ikpuchi omume di otua.
Azịza ajụjụ ndị a bidoro kemgbe afọ iri gara aga site n'ọtụtụ nyocha banyere ụbụrụ ụmụ atụrụ na-achịkwa mana anaghị ewepu homonụ mmekọahụ. Enwetara mmetụta ndị ọzọ na-adịghị egwu egwu. Na mahadum dị na Glasgow na Oslo, a chọpụtara na nchịkwa nke ndị na-egbochi atụrụ ka amamịghe na-ebute mbibi na-adịgide adịgide nke usoro amịgdala nke akụkụ ahụ nke mkpụrụ ndụ na-amịpụta GnRH rutere. Usoro limbic na - ejikọta cognition, ebe nchekwa na mmetụta na - eduga “arụmọrụ dị mma” kwesịrị ekwesị. Na ndị na-egbochi, amygdala ji nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ, na arụmọrụ nke ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe mejupụtara ya gosipụtara gbanwere. Atụrụ ahụ metụtara metụtara gosipụtara obere oge na ebe nchekwa na mmụba nke arụmọrụ mmụọ.
N'oge na-adịbeghị anya, ọmụmụ bench dị iche iche na ụlọ nyocha ndị ọzọ egosiwo mmetụta jọgburu onwe ya nke ndị na-egbochi ndị na-eguzosi ike n'ezi ihe nke akwara sitere na hippocampus, akụkụ ọzọ nke sistemụ limbic. Ikekwe site na ịdakwasị enzyme nke siri ike dị n'ime sel ndị ahụ, ikpughere ndị na - egbochi ihe emeela ka mmebi nke obere ihe ndị sitere na mkpụrụ ndụ akwara na-agwa ibe ha okwu, n'ikpeazụ, na-enye aka na ọrụ nke ụbụrụ.
Ọtụtụ, n'ezie, a ka amaghị banyere ọrụ GnRH zuru ebe nile mana enwere ihe akaebe zuru ezu maka ọrụ mmezi ya na arụ ọrụ neuronal iji maa aka nchịkwa nnwale ya na ụbụrụ ụmụaka na-eto eto.
Kedu otu ụbụrụ na-eto eto nke gbochiri egbochi ga-esi ghọta ọdịnihu nwoke na nwanyị?
Icslọọgwụ nwoke na nwanyị na-emezi ihe ndị na - eto eto na - ekwenye na ha na - enye onye ahụ na - eto eto ohere inwe nchekwube banyere njirimara okike na ịmụ nwa n'ọdịnihu, na - ebelata mkpasu iwe nke ụdị agụụ mmekọahụ achọghị. Ajụjụ a bụ kedu ka nwatakịrị ga-esi nọrọ n'ọnọdụ dị ugbua, site na mgbe ọ dị afọ iri na ọkara, ga-atụ anya ịghọta ụdị ihe ahụ ma ọ gọnarị mmetụta nwoke na-enwe mmekọahụ na-akpata mmekọahụ? Kedụ ka a ga-atụ anya ka nwatakịrị si “chee echiche nke ọma” mgbe agọnarịghị nnabata nke, ọkachasị, GnRH na akụkụ dị iche iche nke ụbụrụ na-ejikọta ebe nchekwa, cognition na mmetụta ya na mmemme ezi uche?
Dabere na bench na ọgwụgwọ anụ ahụ, enwere ike ịtụle nchịkwa nke ndị na-egbochi ndị igbochi abụghị naanị mpụga mpụga kamakwa:
• mmetụta na-eduga n'ụzọ mmekọahụ na ike nke “sociosexual stimuli” na ụbụrụ dị ka onye ogbugbo GnRH na-agbazi;
• na-eme ka omume nwoke na nwanyị bụrụ nke a kapịrị ọnụ nke GnRH n'isi “ebe a na-enwe mmekọahụ” n'ime ụbụrụ;
• nsonaazụ nke abụọ nke testosterone na estrogen na ike ha nke ụbụrụ nke pubescent nọ na-echere ha nwayọ, dịka chromosom ahụ na-ahazi ma na-eduzi kemgbe izu ndị mbụ nke ndụ nwa ebu n'afọ.
• ekpughere ụbụrụ oge ya na homonụ gonadal ndị ahụ, dị ka ihe eke mmụọ nke pubertal si kọọ ya n'oge mbubreyo gosipụtara belata mmetụta ha na mmekọahụ;
• ikike nke aka nke aka limbic ijikota cognition, ncheta na mmetuta ya ma rụọkwa “ọrụ onye isi” maka ịgbasa ụdị ahụ.
Ọ bụ ezie na a na-egbochi usoro ebumpụta ụwa nke imebi njirimara nwoke na nwanyị, nwa a ka bụ nwa aka ya ka a na-ahụta maka nrụgide na-adịgide maka ntughari nke ndị isi ya: ndị nne na nna ya, ndị nkuzi ya, ndị dọkịta, ndị na-agwọ ọrịa, ndị ndụmọdụ na ebe nrụọrụ weebụ. Gọnarịrị ntụgharị nke homonụ eke pụta ụwa ebe enwere mmetụta dị ike dị otú a, ọ bụghị ihe ijuanya na ọmụmụ na-ekpughe na, ozugbo malitere na mgbochi, mmụba ahụike na-aga n'ihu na mmekọahụ ọzọ.
Kedu maka mmetụta homonụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na ụbụrụ?
N'ụzọ dị ịtụnanya, ekpughere ya na mkpụrụ ndụ akwara nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emepụta homonụ nke nwanyị, estrogen, nke ọdịnala chere na ọ bụ naanị ụmụ nwoke tozuru oke na-emepụta. Egosipụtawo na estrogen a na-emepụta mpaghara (nke a maara dị ka neurosteroid) bụ isi maka ọrụ nke neurons, n'ụzọ a ka amabeghị. Ihe ịtụnanya bụ na testosterone, nke sitere na testes buru ibu rue mkpụrụ ndụ ụbụrụ n'ime ụmụ nwoke, yana obere pere mpe site na gland adrenal nke ụmụ nwanyị, na - agbanye ọgwụ n’ime sel ndị ahụ n’ime estrogen.
N'ụzọ dị otú a, ekwenyere estrogen na-edozi ọdịiche nke neurons na mkpụrụ ndụ ha na-akwado. Ọ “na -emepụta ọdịiche nke mmekọahụ na seuronal na-achịkwa… mmụpụta” yana mmepe mmepe nke ndọtị ndị sitere na neurons na otu ha si ekwu okwu, na ọtụtụ puku, n'etiti ibe ha. Nkwụsị nke mkpokọta neuronal nke estrogen na-ebute mbibi nke alaka ndị neurons, otu aka ahụ gosipụtara mmetụta puberty blockers na neurons na ọmụmụ bench. Ikekwe GnRH na-akwado mkpụrụ ndụ akwara site na ịnọgide na-enwe nguzozi nke testosterone na estrogen. Onweghi onye ma.
Ajụjụ na - ebilite: Gịnị ga - eme ọrụ nke onye neurons na mkpokọta ya n'ime ụbụrụ, ọ bụrụ na a ga - eme ya homonụ nke nwoke ma ọ bụ nwanyị na - ejigide ọnụnọ nke ndị emebere ya? Ọzọ, ọnweghị onye maara. Ọ maara na nguzozi nke homonụ mmekọahụ na-ahụ maka ọdịiche nke nwa ebu n'afọ n’ime nwoke ma ọ bụ nwanyị, yana maka nzukọ nke ụbụrụ na-arụ ọrụ nke na-aga n’ihu n’oge ọ bụ nwa ọhụrụ ka ọ na-eche nzụlite ọzọ na mmeme ahụ nwoke na nwanyị ga - eme kpọmkwem. oge uto. Brainbụrụ ụbụrụ na-eto eto nwere ike imeghari ka homonụ nke ihe ọmụmụ ya na-atụghị anya ya?
Na mbido, enyeghị ndụmọdụ ịsị homonụ nwoke na nwanyị ka o nye tupu afọ iri na isii mana ugbu a, na Australia, enweghi oke afọ ọ ga - apụta ma ọ bụrụ na ọ ga - ebute nchịkwa n'oge. A sị ka e kwuwe, esemokwu ahụ na-aga, ọ bụrụ na nwa ahụ kpebiri ịgbanwe mmekọahụ, ọ ga-emebi n'ọdịdị nke ụdị mmekọahụ dị na ndị ọgbọ. Ya mere, mgbe otu afọ ma ọ bụ abụọ tụgharịrị uche na ndị na - egbochi ndị omekome, ọ bụ naanị ihe na-ewetara mmadụ ume ịkwalite njiri mara nke mmekọahụ a họọrọ.
Ruo November 2017, ekwesịrị ịnwe nnabata nke Courtlọikpe Ezinaụlọ nke Australia maka nlekọta nke homonụ nwoke na nwanyị ka ụmụ nwoke na-erubeghị afọ iri na isii mana ụlọ ikpe ahụ kwekọrọ na nkwenye nke ndị ọrụ na ụlọ ọgwụ ụmụ nwanyị, kagburu ibu ọrụ ahụ. Ugbu a, njikwa ọgwụ ndị a na omume mastectomies bụ ndị ga-aza ajụjụ maka naanị ndị na-ede ha.
Mmetụta dị a canaa ka a pụrụ ịtụ anya site na nchịkwa homonụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na ụbụrụ na-arịwanye elu? Onweghi ihe omumu di omimi, mana imuta ihe umuaka nke ndi okenye kari ekpughere ihe umuaka umu nwoke a ka ekpughere ya na mmiri ugboro iri karia mgbe ha mere agadi, ma kpughee obara mmetuta nke umu nwanyi na testosterone. Achọpụtala ọnwụ Neuronal na ọmụmụ bench.
Manymụaka ole dị n'ihe ize ndụ?
Ndị na - akwado "nkwupụta" kwupụtara njupụta nke transgender ịbụ 1.4 ruo 4 pasent nke ndị na - eto eto na - adabere na ajụjụ nyocha onwe onye, ​​ọ bụ ezie na amaara ndị a bụ ndị a na - apụghị ịtụkwasị obi, karịsịa na ndị nọ n'oge uto. Akwụkwọ nke abụọ, na-enyocha ebe niile ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma nọ na-elekọta Kaiser Permanente, nwere ike igosipụta nghọta na-adịghị mma na nsonaazụ nchoputa n'ezie. Ọ na-akọ na ekenyela ụmụaka 1333 dị afọ atọ ruo iri na asaa ka nyocha nke Transgender, Gender Nonconforming nke Kaiser Permanente nọ na mpaghara mpaghara Northern na Southern California na Georgia ebe nzukọ nwere nde mmadụ 8.8 na akwụkwọ ya. Na-echekwa nkesa ndị yiri ya na California n'ozuzu, ụmụaka 1333 ga-anọchi anya 0.078 pasent nke ndị agadi site na afọ atọ ruo afọ iri na asaa.
E kpughere ihe mere ụmụaka ndị a, mana akwụkwọ na-ekwuputa na imirikiti ụmụaka ndị nwere mgbagwoju anya ga-echeta mmekọahụ nwoke na nwanyị na inwe mmekọahụ site na nwoke. N'ime ndị fọdụrụnụ, ihe ka ọtụtụ na-akọ na ha na-eduga mmekọahụ nwoke na nwanyị mana na-edina ụdị onwe. Ya mere, ọnụọgụ '' nọgide '' nwere ike dị ntakịrị karịa na 0.078.
Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ nke Kaiser Permanente chọpụtara nwere ike bụrụ nke butere site na ndị na - eweghachi ọrịa na - efe efe nke 'mberede, mbubreyo, dysphoria na ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma' '. Nyere, ya mere, ochicho nke ihe mmuta di otua gha agbasi, pasent nke ndi nnoghariri nwere ike idi ala ka: na -aru nso ogugu ndi mmadu nke 0.005 rue 0.014 nke nwoke, na 0.002 rue 0.003 pasent na nwanyi nke natal, dika edeputara. site na Akwụkwọ nyocha na nyocha nke sayensị.
Ihe kpatara nsogbu ahụ bụ naanị otu ihe kpatara nnukwu mgbochi na ịhapụ ụmụaka gbagwojuru anya na nnabata nke Protocol Dutch. Na ntụle ahịhịa nke ụmụ akwụkwọ iri abụọ na asatọ nwere ahụmahụ ngụkọta nke afọ 931 nke onye ode akwụkwọ a mere, a na-echeta ikpe iri na abụọ nke ọgba aghara nwoke na nwanyị: mmadụ iri nwere nsogbu uche, abụọ nwere mmegide mmekọahụ. Ntuli aka gosipụtara na enwere ike ịtụ anya otu ikpe kwa afọ iri asaa na isii. Ugbu a, narị kwuru na ha na-eweta Australia kwa afọ na Australia. Protocol Dutch ahụ dị njikere ịgbanwe ọtụtụ ndụ.
Kedu ihe ọzọ dị n'ihe ize ndụ?
Usoro echiche nke "mmuta nwoke na nwanyi" siri ike ndi mmadu. Enweghị mkpesa ọ bụla pụtara na Iwu Mkpesa Ahụike Victoria agbachiwo echiche ọdịnala dị ka nke dị ọcha dị ka amaokwu na Nkwupụta 11 nke Nkwupụta Mba Nile Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ.
Ọ bụrụ na ndị otu na-enwe mmeri na ntuli aka gọọmentị na-esote, "ikike nnwere onwe nke echiche na nkwupụta… yana ịchọ, nata ma kesaa ozi na echiche site na mgbasa ozi ọ bụla", dị ka e gosipụtara na Nkeji edemede 19 nke Nkwupụta ahụ kwere nkwa na ọ ga-agbagha. mmachibido iwu a na-akpọ ọgwụgwọ ntụgharị. Ogologo oge ole ka a ga-enwe ike ịhapụ ibipụta ajụjụ site Anọ ebe?
Ọbụna ikike mmadụ nwere maka nchebe na nnwale, nke e gosipụtara nke ọma na Nuremberg Code, ka ọ dị ka a leghaara anya na ọgwụgwọ nke dysphoria okike nwata, nke a na-ekwupụta na esiteghị n'ụkpụrụ ọ bụla. E guzobere iwu a iji chebe ụmụ mmadụ site na mmebi iwu dị egwu nke nyocha a na-eme na Nazi Germany.
Anaghị m ebo ndị na-agwọ ọrịa n ’ụlọ ọgwụ na-ahụ maka nwoke na nwanyị ebubo mmejọ arụrụala dị otú a. M na-ekwupụta ma nhụjuanya nke ụmụaka nwere dysphoria okike na mkpebi ọmịiko nke ndị ọrụ iji belata ahụhụ ahụ. Ka o sina dị, akụkọ banyere ahụike gosipụtara ihe egwu dị na ihe ndị a na-akwadoghị, n'agbanyeghị ezi uche niile dị n'ụwa. Ndụmọdụ nke Nuremberg Code ka a na-enweta nkwanye ugwu na echiche ya:
• mkpa maka "nghọta nkwenye" ​​nke isiokwu. Ma, ụmụaka a na-egbochi egbochi hà ga-enwe mmekọahụ n'ọdịnihu? Childrenmụaka nwere uche nwere ike ịghọta ọdịnihu dị otú a?
• Ọ dị mkpa maka nsonaazụ nke enweghị ike iru ọzọ n'ụzọ ọ bụla. Mana imirikiti ụmụaka ga-alaghachi na nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọ nweghịkwa ụzọ dị mma ha ga-esi ekpebi onye na-agaghị eme ya. Cannye ga-ebu amụma na 'ọmịiko, ilele na ichere' agaghị adị irè?
• Nnwale ahụ ga-adabere n'ihe ọmụma gara aga, gụnyere ọmụmụ anụmanụ. Ma, banyere dysphoria okike nwata enweghi ihe omuma a tupu ama, a na-eleghara ihe omumu banyere umu anumanu anya kwesiri ileghara anya.
• Ihe egwu dị na nnwale ahụ agaghị agafe uru a tụrụ anya ya. Mana, ihe omumu banyere anumanu na-ekwuputa nsogbu nke emebi emebi nke aru. N'aka nke ọzọ, enweghi akaebe ogologo oge na ụmụaka dysphoric ga-erite uru site na nkwupụta. Na, enwere ogologo oge ọgbụgba na ndị okenye transgengen nwere oke oke igbu onwe ha.
• Ndị ọrụ ahụ ga-enwerịrị nke ọma. Ma tsunami ohuru nke dysphoria di na nwanyi putara na ndi dibia bekee di obere nwere ezigbo oru n ’ulo oru. Ndị mmadụ na-amụ ka ha na-aga.
• Ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ga-akwụsị nnwale ahụ mgbe ha chọpụtara na nnwale ahụ dị ize ndụ. Mana, ọ bụrụ na enweghị usoro nchọpụta ọdịnala, olee otu ndị ọrụ ga-esi mata mgbe ihe adịla? Ọ bụrụ na enweghị ụdị ule dị otú ahụ, a na-eji ịnụ ọkụ n'obi agbachitere lobotomies ogologo oge na ọnụ nke ọtụtụ puku ntinye aka.
• Isiokwu kwesịrị ịnwe onwe ha ịhapụ ọmụmụ n'oge ọ bụla. Ma olee nwatakiri ga-enwe ike ịhapụ onye ọhụụ, ikwenye ọgwụ ọjọọ na ntinye ọnụ nke ndị ikike?
Usoro Nuremberg ekwughi nnwere onwe nke ndị ọrụ ahụike ka ha ghara itinye aka na nnwale ahụ. Mana, ọ bụrụ na Labortù Ahụ Ike nwere ụzọ, steeti ahụ ga-ahụ na ọ nweghị dọkịta ga-enwere onwe ya ịghara idobe nwatakịrị ahụ na Protocol Dutch.
Dr John Whitehall bụ Prọfesọ nke Paediatrics na Western Sydney University. Isiokwu ya "Dysphoria Child na Ọrụ nke slọikpe" pụtara na mbipụta May 2017, yana "Courtlọ ikpe ezinaụlọ ga-echekwa ụmụaka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị" na mbipụta November 2017.